နိုင်ငံအလိုက် ဗုဒ္ဓဘာသာ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူဦးရေ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
နိုင်ငံအလိုက် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်မှုပြ မြေပုံ (ရင်းမြစ် Pew Research Center
ဗုဒ္ဓဘာသာ သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်များ စာရင်းအရ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူဦးရေ ၄၈၈ သန်းခန့်၊  ၄၉၅ သန်း၊ သို့မဟုတ် ၅၃၅ သန်းခန့် အထိ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သော ဘာသာတရားနှင့် အယူဝါဒဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ ၇% မှ ၈% အထိ ရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးရေ အများဆုံးသော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းခြေ ၂၄၄ သန်းခန့်ရှိကာ နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၁၈.၂% ခန့် ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်သည်။ မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာသည် အရှေ့အာရှတွင် ယုံကြည်ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာတရားဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးရေ၏ ထက်ဝက်ခန့် ရှိသည်။
ဒုတိယအကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းမှာ ထေရဝါဒ ဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှတွင် အများဆုံး ကိုးကွယ်ကြသည်။ တတိယနှင့် အသေးငယ်ဆုံးသော ဂိုဏ်းမှာ တန္တရယန ဖြစ်ပြီး တိဗက်၊ ဟိမဝန္တာဒေသ၊ မွန်ဂိုးလီးယားနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ၏ နေရာအချို့တွင် ကိုးကွယ်ကြသည်။
ပီတာဟာဗေး၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ
အရှေ့ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာ (မဟာယန) တွင် ကိုးကွယ်သူ သန်း ၃၆၀၊
တောင်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာ (ထေရဝါဒ) တွင် ကိုးကွယ်သူ သန်း ၁၅၀၊
မြောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာ (တန္တရယန) တွင် ကိုးကွယ်သူ ၁၈.၂ သန်း ရှိပြီး
အာရှမဟုတ်သော ကျန်နေရာများရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှာ ၇ သန်း ဖြစ်သည်။
၁ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများဆုံးရှိရာ နိုင်ငံများစာရင်း
၄ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးရေ အများဆုံးသော နိုင်ငံ ဆယ်ခု
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အများဆုံးရှိရာ နိုင်ငံများစာရင်းပြင်ဆင်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးရှိရာ နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံ ရှိသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရာခိုင်နှုန်း (၂၀၁၀)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဦးရေ (ခန့်မှန်း)
နိုင်ငံတွင်းရှိ စုစုပေါင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် %
ကမ္ဘောဒီးယား ၁၃,၇၀၁,၆၆၀ ၉၆.၉၀ %
ထိုင်း ၆၄,၄၁၉,၈၄၀ ၉၃.၂၀ %
မြန်မာ ၄၈,၄၁၅,၉၆၀ ၈၇.၉၀ %
ဘူတန် ၅၆၃,၀၀၀ ၇၄.၇၀ %
သီရိလင်္ကာ ၁၄,၂၂၂,၈၄၄ ၇၀.၂ % 
လာအို ၄,၀၉၂,၀၀၀ ၆၆.၀၀ %
မွန်ဂိုးလီးယား ၁,၅၂၀,၇၆၀ ၅၅.၁၀ %
ဂျပန် ၈၄,၆၅၃,၀၀၀ သို့ ၄၅,၈၀၇,၄၈၀ ၆၇% သို့ ၃၆.၂%
စင်ကာပူ ၁,၇၂၅,၅၁၀ ၃၃.၉၀ %
ထိုင်ဝမ် ၈,၀၀၀,၀၀၀ သို့ ၄,၉၄၅,၆၀၀ ၃၅% သို့ ၂၁.၁%
နီပေါ ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀% သို့ ၁၂%
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် % ၁။ Pew, ၂။ ARDA.
အာဖဂန်နစ္စတန် ၂၄,၁၀၈,၀၇၇ < ၀.၁%
အယ်လ်ဂျီးရီးယား 38,087,812 < 0.1%
အမေရိကန်ဆမိုးအား 26,719 0.3%
အင်ဂိုလာ 18,565,269 < 0.1%
အာဂျင်တီးနား 42,610,981 < 0.1%
အာရူးဗာ 109,153 0.1%
ဩစတြေးလျ 22,262,501 2.7% 528,977
ဩစတြီးယား 221,646 0.2%
ဘဟားမား 319,031 < 0.1%
ဘာရိန်း 1,281,332 2.5%
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် 159,654,860 0.5%
ဘာဘေးဒိုးစ် 288,725 < 0.1%
ဘီလာရုဇ် 9,625,888 < 0.1%
ဘယ်လ်ဂျီယမ် 10,444,268 0.2%
ဘလိဇ် 297 0.5%
ဘာမြူဒါ 69,467 0.5%
ဘူတန် 725,296 74.7% 563,000
ဘိုလီးဗီးယား 10,461,053 < 0.1%
ဘော့ဆွာနာ 2,127,825 < 0.1%
ဘရာဇီး 201,009,622 0.1%
ဘရူနိုင်း 415,717 8.6%
ဘူဂေးရီးယား 6,981,642 < 0.1%
ဘာကီးနားဖားဆို 17,812,961 < 0.1%
မြန်မာ 55,167,330 87.90% 48,415,960
ကမ္ဘောဒီးယား 15,205,539 96.9% 13,701,660
ကင်မရွန်း 20,549,221 < 0.1%
ကနေဒါ 34,568,211 0.8%
ချဒ် 11,193,452 < 0.1%
ချီလီ 17,216,945 < 0.1%
တရုတ်ပြည် 1,349,585,838 18.2% 244,130,000
ခရစ္စမတ်ကျွန်း 1,513 < 0.1%
ကိုလံဘီယာ 45,745,783 < 0.1%
တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း DRC 75,507,308 < 0.1%
ကွန်ဂို 4,492,689 < 0.1%
ကော့စတာရီကာ 4,695,942 < 0.1%
တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Cote d'Ivoire 22,400,835 < 0.1%
ခရိုအေးရှား 4,475,611 < 0.1%
ကျူးဘား 11,394,043 < 0.1%
ဆိုက်ပရပ်စ် 1,155,403 0.2%
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ 10,162,921 < 0.1%
ဒိန်းမတ် 5,556,452 0.2%
ဒိုမီနီကာ 73,286 0.1%
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ 10,219,630 < 0.1%
အီကွေဒေါ 15,439,429 < 0.1%
အီဂျစ် 85,294,388 < 0.1%
အယ်ဆာဗေဒို 6,108,590 < 0.1%
အက်စတိုးနီးယား 1,266,375 < 0.1%
အီသီယိုးပီးယား 93,877,025 < 0.1%
ဖော့ကလန်ကျွန်းစု 3,140 < 0.1%
မိုက်ခရိုနီးရှားနိုင်ငံ 106,104 0.4%
ဖီဂျီ 896,758 < 0.1%
ဖင်လန် 5,266,114 < 0.1%
ပြင်သစ် 65,951,611 0.5%
ပြင်သစ်ဂီအားနား 239,450 < 0.1%
ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား 277,293 < 0.1%
ဂျာမနီ 81,147,265 0.3%
ဂါနာ 22,931,299 < 0.1%
ဂရိ 10,772,967 < 0.1%
ဂူအမ် 160,378 1.1%
ဂွါတီမာလာ 14,373,472 < 0.1%
ဂီနီ 11,176,026 < 0.1%
ဂိုင်ယာနာ 739,903 < 0.1%
ဟေတီ 9,893,934 < 0.1%
ဟွန်ဒူးရပ်စ် 8,448,465 0.1%
ဟောင်ကောင် 7,182,724 13.2%
ဟန်ဂေရီ 9,939,470 < 0.1%
အိုက်စလန် 315,281 0.4%
အိန္ဒိယ 1,220,800,359 0.8% 9,250,000
အီရန် 79,853,900 < 0.1%
အီရတ် 31,858,481 < 0.1%
အစ္စရေး 7,707,042 0.2%
အီတလီ 61,482,297 0.2%
ဂျမေကာ 2,909,714 < 0.1%
ဂျပန် 127,253,075 36.2% 45,820,000
ဂျော်ဒန် 6,482,081 0.4%
ကာဇက်စတန် 17,736,896 0.2%
ကင်ညာ 44,037,656 < 0.1%
မြောက်ကိုရီးယား 24,720,407 1.5%
တောင်ကိုရီးယား 48,955,203 22.9% 11,050,000
ကူဝိတ် 2,695,316 2.8%
ကာဂျစ္စတန် 5,548,042 < 0.1%
လာအို 6,695,166 66.1% 4,092,000
လတ်ဗီယာ 2,178,443 < 0.1%
လက်ဘနွန် 4,131,583 0.2%
လီဆိုသို 1,936,181 < 0.1%
လိုက်ဘေးရီးယား 3,989,703 < 0.1%
လစ်ဗျား 6,002,347 0.3%
လစ်တန်စတိန်း 37,009 < 0.1%
လစ်သူယေးနီးယား 3,515,858 < 0.1%
လူဇင်ဘတ် 514,862 < 0.1%
မကာအို 583,003 17.3%
မက်စီဒိုးနီးယား 2,087,171 < 0.1%
မဒါဂတ်စကား 22,599,098 < 0.1%
မာလဝီ 16,777,547 < 0.1%
မလေးရှား 29,628,392 17.7%
မော်လဒိုက် 393,988 0.6%
မာလီ 15,968,882 < 0.1%
မော်လတာ 411,277 < 0.1%
မာတီနစ် 403,795 < 0.1%
မောရစ်ရှ 1,322,238 < 0.1%
မက္ကဆီကို 116,220,947 < 0.1%
မွန်ဂိုးလီးယား 3,226,516 55.1% 1,520,760
မွန်တီနီဂရိုး 653,474 < 0.1%
မော်ရိုကို 32,649,130 < 0.1%
မိုဇမ်ဘစ် 24,096,669 < 0.1%
နမီးဘီးယား 2,182,852 < 0.1%
နအူရူးနိုင်ငံ 9,434 1.1%
နီပေါ 30,430,267 10.3%
နယ်သာလန် 16,805,037 0.2%
နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား 264,022 0.6%
နယူးဇီလန် 4,365,113 1.6%
နီကာရာဂွါ 5,788,531 < 0.1%
နိုင်ဂျီးရီးယား 174,507,539 < 0.1%
မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစု 51,170 10.6%
နော်ဝေ 4,722,701 0.6%
အိုမန် 3,154,134 0.8%
ပါကစ္စတန် 193,238,868 < 0.1%
ပလောင်း 21,108 0.8%
ပါလက်စတိုင်း 4,293,313 < 0.1%
ပနားမား 3,559,408 0.2%
ပါပူအာ နယူးဂီနီ 6,431,902 < 0.1%
ပါရာဂွေး 6,623,252 < 0.1%
ပီရူး 29,849,303 0.2%
ဖိလစ်ပိုင် 98,215,000 1,964,300
ပိုလန် 38,383,809 < 0.1%
ပေါ်တူဂီ 10,799,270 0.6%
ပေါ်တိုရီကို 3,674,209 0.3%
ကာတာ 2,042,444 3.1%
ရယ်ယူးနီယွန်း 839,500 0.2%
ရိုမေးနီးယား 21,790,479 < 0.1%
ရုရှား 142,500,482 0.1%
ဆီနီဂေါ 12,521,851 0.3%
ဆားဘီးယား 10,150,265 < 0.1%
ဆေးရှဲ 90,846 < 0.1%
စင်ကာပူ 5,460,302 33.9%
ဆလိုဗက်ကီးယား 5,488,339 < 0.1%
ဆလိုဗေးနီးယား 1,992,690 < 0.1%
ဆော်လမွန်ကျွန်းစု 597,248 0.3%
တောင်အာဖရိက 48,601,098 0.2% 1+
စပိန် 47,370,542 < 0.1%
သီရိလင်္ကာ 21,675,648 69.3% 14,222,844
ဆူဒန် 34,847,910 < 0.1%
ဆူရာနမ် 566,846 0.6%
ဆွာဇီလန် 1,403,362 < 0.1%
ဆွီဒင် 9,119,423 0.4%
ဆွစ်ဇာလန် 7,996,026 0.4%
ထိုင်ဝမ် 23,299,716 21.3%
တာဂျစ်ကစ္စတန် 7,910,041 < 0.1%
တန်ဇေးနီးယား 48,261,942 < 0.1%
ထိုင်း 67,448,120 93.2% 13,701,660
တိုဂို 7,154,237 < 0.1%
တူနီးရှား 10,835,873 < 0.1%
ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂို 1,225,225 0.3%
တူရကီ 80,694,485 < 0.1%
တာ့ခ်မင်နစ္စတန် 5,113,040 < 0.1%
တူဗားလူ 10,698 < 0.1%
ယူဂန်းဒါး 34,758,809 < 0.1%
ယူကရိန်း 44,573,205 < 0.1%
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု 5,473,972 2.0%
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း 63,395,574 0.4%
အမေရိကန် 316,668,567 1.2% 1,200,000
ဥရုဂွေး 3,324,460 < 0.1%
အမေရိကန် ဗာဂျင်အိုင်းလန်း 104,737 < 0.1%
ဥဇဘက်ကစ္စတန် 28,661,637 < 0.1%
ဗနွားတူနိုင်ငံ 261,565 < 0.1%
ဗင်နီဇွဲလား 28,459,085 < 0.1%
ဗီယက်နမ် 92,477,857 16.4% 14,380,000
ယီမင် 25,408,288 < 0.1%
ဇမ်ဘီယာ 14,222,233 < 0.1%
ဇင်ဘာဘွေ 13,182,908 < 0.1%
ဒေသအလိုက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးရေ (၂၀၁၀)
အာရှ-ပစိဖိတ် ၄,၀၅၄,၉၉၀,၀၀၀ ၄၈၁,၂၉၀,၀၀၀ ၁၁.၉%
မြောက်အမေရိက ၃၄၄,၅၃၀,၀၀၀ ၃,၈၆၀,၀၀၀ ၁.၁%
ဥရောပ ၇၄၂,၅၅၀,၀၀၀ ၁,၃၃၀,၀၀၀ ၀.၂%
အရှေ့အလယ်ပိုင်း-မြောက်အာဖရိက ၃၄၁,၀၂၀,၀၀၀ ၅၀၀,၀၀၀ ၀.၁%
လက်တင်အမေရိက-ကာရစ်ဘီယံ ၅၉၀,၀၈၀,၀၀၀ ၄၁၀,၀၀၀ <၀.၁%
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးရေ အများဆုံးသော နိုင်ငံ ဆယ်ခုပြင်ဆင်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးရေ အများဆုံးနိုင်ငံများ (၂၀၁၀)
နိုင်ငံလူဦးရေ စုစုပေါင်း၏ %
တရုတ်နိုင်ငံ ၂၄၄,၁၃၀,၀၀၀ ၁၈.၂% ၄၆.၄%
ထိုင်းနိုင်ငံ ၆၄,၄၂၀,၀၀၀ ၉၃.၂% ၁၂.၂%
ဂျပန်နိုင်ငံ ၄၅,၈၂၀,၀၀၀ ၃၆.၂% ၉.၂%
မြန်မာနိုင်ငံ ၃၈,၄၁၀,၀၀၀ ၈၇.၉၀% ၇.၃%
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ၁၄,၄၅၀,၀၀၀ ၆၉.၃% ၂.၈%
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ၁၄,၃၈၀,၀၀၀ ၁၆.၄% ၂.၇%
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ၁၃,၆၉၀,၀၀၀ ၉၆.၉% ၂.၉%
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၁၁,၀၅၀,၀၀၀ ၂၂.၉% ၂.၁%
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၉,၂၅၀,၀၀၀ ၀.၈% ၁.၈%
မလေးရှားနိုင်ငံ ၅,၀၁၀,၀၀၀ ၁၇.၇% ၁%
↑ ၁.၀၀၀ ၁.၀၀၁ ၁.၀၀၂ ၁.၀၀၃ ၁.၀၀၄ ၁.၀၀၅ ၁.၀၀၆ ၁.၀၀၇ ၁.၀၀၈ ၁.၀၀၉ ၁.၀၁၀ ၁.၀၁၁ ၁.၀၁၂ ၁.၀၁၃ ၁.၀၁၄ ၁.၀၁၅ ၁.၀၁၆ ၁.၀၁၇ ၁.၀၁၈ ၁.၀၁၉ ၁.၀၂၀ ၁.၀၂၁ ၁.၀၂၂ ၁.၀၂၃ ၁.၀၂၄ ၁.၀၂၅ ၁.၀၂၆ ၁.၀၂၇ ၁.၀၂၈ ၁.၀၂၉ ၁.၀၃၀ ၁.၀၃၁ ၁.၀၃၂ ၁.၀၃၃ ၁.၀၃၄ ၁.၀၃၅ ၁.၀၃၆ ၁.၀၃၇ ၁.၀၃၈ ၁.၀၃၉ ၁.၀၄၀ ၁.၀၄၁ ၁.၀၄၂ ၁.၀၄၃ ၁.၀၄၄ ၁.၀၄၅ ၁.၀၄၆ ၁.၀၄၇ ၁.၀၄၈ ၁.၀၄၉ ၁.၀၅၀ ၁.၀၅၁ ၁.၀၅၂ ၁.၀၅၃ ၁.၀၅၄ ၁.၀၅၅ ၁.၀၅၆ ၁.၀၅၇ ၁.၀၅၈ ၁.၀၅၉ ၁.၀၆၀ ၁.၀၆၁ ၁.၀၆၂ ၁.၀၆၃ ၁.၀၆၄ ၁.၀၆၅ ၁.၀၆၆ ၁.၀၆၇ ၁.၀၆၈ ၁.၀၆၉ ၁.၀၇၀ ၁.၀၇၁ ၁.၀၇၂ ၁.၀၇၃ ၁.၀၇၄ ၁.၀၇၅ ၁.၀၇၆ ၁.၀၇၇ ၁.၀၇၈ ၁.၀၇၉ ၁.၀၈၀ ၁.၀၈၁ ၁.၀၈၂ ၁.၀၈၃ ၁.၀၈၄ ၁.၀၈၅ ၁.၀၈၆ ၁.၀၈၇ ၁.၀၈၈ ၁.၀၈၉ ၁.၀၉၀ ၁.၀၉၁ ၁.၀၉၂ ၁.၀၉၃ ၁.၀၉၄ ၁.၀၉၅ ၁.၀၉၆ ၁.၀၉၇ ၁.၀၉၈ ၁.၀၉၉ ၁.၁၀၀ ၁.၁၀၁ ၁.၁၀၂ ၁.၁၀၃ ၁.၁၀၄ ၁.၁၀၅ ၁.၁၀၆ ၁.၁၀၇ ၁.၁၀၈ ၁.၁၀၉ ၁.၁၁၀ ၁.၁၁၁ ၁.၁၁၂ ၁.၁၁၃ ၁.၁၁၄ ၁.၁၁၅ ၁.၁၁၆ ၁.၁၁၇ ၁.၁၁၈ ၁.၁၁၉ ၁.၁၂၀ ၁.၁၂၁ ၁.၁၂၂ ၁.၁၂၃ ၁.၁၂၄ ၁.၁၂၅ ၁.၁၂၆ ၁.၁၂၇ ၁.၁၂၈ ၁.၁၂၉ ၁.၁၃၀ ၁.၁၃၁ ၁.၁၃၂ ၁.၁၃၃ ၁.၁၃၄ ၁.၁၃၅ ၁.၁၃၆ ၁.၁၃၇ ၁.၁၃၈ ၁.၁၃၉ ၁.၁၄၀ ၁.၁၄၁ ၁.၁၄၂ ၁.၁၄၃ ၁.၁၄၄ ၁.၁၄၅ ၁.၁၄၆ ၁.၁၄၇ ၁.၁၄၈ ၁.၁၄၉ ၁.၁၅၀ ၁.၁၅၁ ၁.၁၅၂ ၁.၁၅၃ ၁.၁၅၄ ၁.၁၅၅ ၁.၁၅၆ ၁.၁၅၇ ၁.၁၅၈ ၁.၁၅၉ ၁.၁၆၀ ၁.၁၆၁ ၁.၁၆၂ ၁.၁၆၃ ၁.၁၆၄ ၁.၁၆၅ ၁.၁၆၆ ၁.၁၆၇ ၁.၁၆၈ ၁.၁၆၉ ၁.၁၇၀ ၁.၁၇၁ ၁.၁၇၂ ၁.၁၇၃ ၁.၁၇၄ ၁.၁၇၅ ၁.၁၇၆ ၁.၁၇၇ ၁.၁၇၈ ၁.၁၇၉ ၁.၁၈၀ ၁.၁၈၁ ၁.၁၈၂ ၁.၁၈၃ ၁.၁၈၄ ၁.၁၈၅ Pew Research Center, Global Religious Landscape: Buddhists
↑ (2013) The World's Religions in Figures: An Introduction to International Religious Demography. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 34–37။2September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Harvey, Peter (2013). An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices, 2nd, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 5. ISBN 9780521676748။2September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life (December 2012), The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010 (PDF), Pew Research Center, retrieved9October 2013
↑ ၆.၀ ၆.၁ 
↑ CIA's The World Factbook: Populations as of July 2013
↑ Religions in Philippines | PEW-GRF
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နိုင်ငံအလိုက်_ဗုဒ္ဓဘာသာ&oldid=409564" မှ ရယူရန်
၂၈ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။